Wararka - Baoding Lida Plastic Industry Co., Ltd. ayaa ku guuleysatay Magaca Sharafta ee “Tobanka Sare ee ugu sarreeya (Xaashka Caagga ah) ee Warshadaha Caaga ee Warshadaha Fudud ee Shiinaha”
Baoding Lida Plastic Industry Co., Ltd. Waxay Ku Guulaysatay Magaca Sharafta ee “Tobanka Sare (Xaashka Caagga ah) ee Warshadaha Caaga ee Warshadaha Fudud ee Shiinaha”
Warshadaha tobanka shirkadood ee warshadaha iftiinka ugu sarreeya ee Shiinaha, Baoding Lida Plastic Industry Co., Ltd. ayaa ku guuleysatay magaca sharafta ee “Tobanka ugu sarreeya warshadaha caagga warshadaha iftiinka ee Shiinaha (xaashi caag ah). Tan iyo markii la aasaasay 1997, Lida Plastic waxay had iyo jeer u hoggaansamaysaa waddada takhasuska warshadaha iyo awoodda alaabada. Iyada oo ay hormuud u tahay cilmi-baarista teknolojiyadda iyo horumarinta, xakamaynta tayada adag, habka suuq-geynta gaarka ah, adeegga iibinta kaamil ah ayaa caan ku ah gudaha iyo dibaddaba, Waxaan nahay xirfadle shirkad soo-saaris ku leh cilmi-baarista iyo horumarinta. Mustaqbalka waxaan sii wadi doonnaa inaan u adeegsanno xamaasad, daacadnimo, xoog iyo saaxiibo ka kooban dhammaan qaybaha nolosha si aan u qaabeyno berri ka wanaagsan, horay u sii wadno.
Tan iyo markii la aasaasay 1997, Baoding Lida Plastic Industry Co., Ltd. waxay abuurtay dhaqan wax -soo -saar joogto ah iyo horumarin adeeg, isla markiiba waxay isu beddeshay shirkad caan ka ah caalamka. Waxaan si joogto ah ugu soo bandhignay tas -hiilaad wax -soo -saar oo shisheeye ah ilaa iyo hadda waxaan haynaa 20 tas -hiilaad oo heer sare ah, 35 tas -hiilaad oo tuubooyin iyo alaabooyin kale oo caag ah. Shirkaddu waxay dabooshaa aag dhan 230000 mitir murabac, waxsoosaarka sanadlaha ahna wuxuu kor u dhaafayaa 80000 tan. Annagu waxaan nahay shirkadda keliya ee diyaarisay oo samaysay halbeeggii qaranka ee alaabta caagga ah.
Tayada badeecadaheena iyo adeegyadeena waxaa lagu cabiraa iyadoo lagu saleynayo heerarka iyo tilmaamaha qaranka iyo kuwa caalamiga ah. Marka laga reebo samaynta baadhitaanno dhammaystiran oo gudaha ah, waxaan helnay tiro shahaadooyin dibadeed ah, tusaale ahaan. waxaan si dhab ah u qaadannay Aqoonsiga Maareynta Tayada Caalamiga ah ee ISO9001 ee tayada. Sannadkii 2003-dii waxay heshay Shahaado Ganacsi oo tiknoolajiyad sare leh, ka dibna waxay gudubtay shahaadada ka-dhaafitaanka badeecadda kormeerka ilaalinta tayada ee 2007. Waxaan helnay shahaadada nidaamka maaraynta deegaanka ee ISO14001 sannadkii 2008. Waxaan dhidibnay shabakad iib oo adduunka oo dhan ah, oo ay taageerto macaamiisha weligeed u jihaysan iyo hagaajinta joogtada ah ee badeecadaha iyo hababka. Illaa iyo hadda wax soo saarka ayaa loo dhoofiyay in ka badan 30 dal, sida Ameerika, Ingiriiska, Canada, Australia, Singapore, Malaysia, Thailand iyo wixii la mid ah. Waxaan ku guuleysanay qiimeyn wanaagsan dhammaan macaamiisheena xaqa alaabta wax -qabadka sare leh, qiimaha mudnaanta leh iyo adeegga wax -qabadka oo dhan.
Waqtiga dhejinta: Mar-25-2021